Injabulo yawaseSoweto ilele eGermany
YIBO abaqeqeshi abadabuka eGermany * -Ernst Middendop noJosef Zinnbauer okubhekwe ukuth bazokwazi yini ukuqeda indlala yezicoco kwi-Orlando Pirates nakwiKaizer Chiefs
MIHLALI BALEKA | May 31, 2020
UKUBA umlandeli wezinkunzi zaseSoweto kumasizini edlule kufanele ukuthi bekufana nokuhlohlobezwa ngommese emphinjeni kulandela ukuphendulwa ihlaya kwala maqembu.
Kodwa ngemuva kokuthi i-Orlando Pirates ngonyaka odlule ilandele omakhelwane bayo, iKaizer Chiefs, yaqasha umqeqeshi odabuka eGermany, zijikile izinto eSoweto.
Cishe acela kwangu-10 amasizini kwagcina ukuthi kube nendebe eSoweto kwazise iPirates unyaka wayo wesihlanu ibulawa indlala, ingahlabani ngasicoco kanjalo neChiefs ikowesine ibhekwe yisambane.
Lesi sinyama eseleke la maqembu sibukeka sisuka emathunjini olibofuzo kwazise eminyakeni engu-50 inzala yeChIefs kwaba yi-Orlando Pirates ngemuva kokuthi uKaizer Motaung ahlubuka kwiSea Robbers wayoqala Amakhosi.
Kodwa muva nje izinto zimanukwenzeka ngoba kube inkunzi endala iPirates esike iphethini kwiChiefs. Ngenxa yokungahambi kwezinto kahle ngo-2018 iChiefs iphinde yaqasha * -Ernst Middendorp, yakhomba indlela umqeqeshi wase-Italy uGiovanni Solinas.
Ukuqashwa kukaMiddendorp kwaba yisinyathelo esilandelwe ukuhhomuzela kubalandeli phezu kokuba wayewine i-Absa Cup neSAA Supa 8 (manje asebizwa ngeTelkom Knockout neMTN 8) kodwa isono sakhe kwabe kuwukuthi wayehlulekile ukunqoba iligi.
Esehlezi esigqikini sokuqeqesha uMiddendorp Amakhosi aphinde abhekwa ubumnyama ehlulwa yiTS Galaxy kwiNedbank Cup Final eyayiseMoses Mabhida Stadium, eThekwini, nokwaholela ekutheni kube yisizini yesine eshwiba izandla.
Kusabatshazwa lokho leli qembu laqeda lihlezi endaweni yesishayagalolunye kwi-log ye-Absa Premiership.
Ukwehlulwa kweChiefs kwalandela imvula yamazwi eyayithi akakhonjwe afika ngayo uMiddendorp kodwa kwafana nokuthi bathela amanzi emhlane wedada ngoba abaphathi badla imihlathi bafa nalo mqeqeshi oneminyaka engu-61, bamsikele ngisho abadlali abasha ukuqinisa isikwati.
Ngemuva kwalokho washa umsebenzi uMiddendorp waqhamuka nolunye unyawo kule sizini ezakhe zahlala esicongweni nokuthele izithelo zokuthi ziwine kabili iQ innovation ehambisana noR1.5 million.
Wangagcina lapho waphinde wahlabana kathathu ngesomqeqeshi wenyanga ohamba phambili kwiPremiership.
Ukwenza kahle kwalo mqeqeshi kwaphoqa ukuthi izimbangi zayo ezindala iPirates zishintshe ukuqalaza zayolanda umqeqeshi waseGermany uJosef Zinnbauer ukuze atakule umkhumbi owawucwila kuRulan Mokwena owayengene endaweni kaMicho Sredojevic owasula isigubhukane.
Ukuqashwa kwalo mqeqeshi ongaziwa nongenarekhodi elizikhulumelayo kunobhutshuzwayo womhlaba kwaqubula ukukhala kwabanye abalandeli ukuthi uzokwazi yini ukwenza umsebenzi oncomekayo kuleli qembu amasizini amabili elilale endaweni yesibili kwiPremiership.
Lo mqeqeshi (50) uhlale amagqoza emsebenzini wakhe ahlangana amathambo nokuvale umlomo abebemngabaza.
Ukushaya kwakhe umsebenzi kufakazelwe wukuthi iqembu lakhe lehlukaniswe amaphuzu ayisishiyagalombili ngaphambi kokuthi kumiswe imidlalo yePremiership kuhlasela iCoronavirus.
Ngaphezu kwalokho amaBhakabhaka asethubeni lokuzibekisela indawo yokuyodlala kwiChampions League noma kwiConfederation Cup.
Womabili la maqembu akungatshazwa ukuthi azobe ethembele emlingweni walaba baqeqeshi emidlalweni yeligi esele ukuthi yesule imvula yezinyembezi zabalandeli abazifela ngalezi zinkunzi zaseSoweto.